नेपाली श्रमिकहरुलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन युएईले गर्यो यस्ता कामहरु ! - Samajik Patra
नेपाली श्रमिकहरुलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन युएईले गर्यो यस्ता कामहरु !
युएईको नेतृत्वले संकट व्यवस्थापन गर्न तत्परता र विशेषज्ञता प्रमाणित गरेको छ । युएईका अधिकारीहरूले नेपाली कामदारहरूको सुरक्षा साथै सबैको स्वास्थ्यलाई प्राथना।
सोमवार, भाद्र ८ २०७७०१:२३:०८
मृगौला पिडित ११ बर्षका बालकलाई जापानबाट आर्थिक सहयोग
अलपत्र २५ हजार मजदुर स्वदेश फर्किंदा लाग्ने सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने, यस्तो छ तयारी